सीटीइभीटीलाई खुल्ला पत्र : ३ वर्षे पढाई ५ वर्षमा नसकी 'छोटो समयमा रोजगारी' भन्न लाज लाग्दैन? - Kantipath.com
विश्वब्यापी कोरोना भाईरसको महामारीले गर्दै सबै क्षेत्र ठप्प छन् । पठनपाठन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको घोषणा गरेको छ । प्राविधिक र प्रयोगात्मक ज्ञान लिनुपर्ने विषयमा अनलाईन कक्षा खासै उपयोगी हुन सकिरहेको छैन । ३ वर्षे पढाईमा भर्ना भएका तेज बहादुर श्रेष्ठको पढाई ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । यसै सन्दर्भमा उनले सीटीइभीटीका परीक्षा नियन्त्रकलाई खुल्ला पत्र लेखेका छन्, जसको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सीटीइभीटी परीक्षा नियन्त्रक ज्यु,
सानो ठिमी भक्तपुर ।
विषय : भविष्यको सम्बन्धमा र सीटीइभीटीको कमजोरी ।
म तपाईंको विद्यार्थी हुँ । मलाई रोग भन्दा डर भविष्यको छ र भविष्यको भन्दा डर म माथी सोधिने प्रश्न, ‘अहिले कुन सेमेस्टरमा? पढाई सकियो? के गर्छौ अचेल ? जागीर कहिले खान्छौ? बाबालाई साहुले कराउँछ बाबू ऋण कहिले तिर्छौ? तिमीलाई पढाउन मैले बैंकमा राखेको तिलहरीको ब्याज के गरि तिर्ने ?’ यस्तो प्रश्नको जबाफ के गरि दिउँ भनि डर लाग्छ। यति धेरै प्रश्नबाचक चिन्ह म माथी खडा गरिन्छ र म जवाफ विहिन हुन्छु। किनकि म एक विद्यार्थी हुँ।
तीन वर्ष अवधि तोकिएको हाम्रो पढाइ आज पाँच वर्ष लाग्दा पनि टुंगो लागेको छैन। सीटीइभीटीले गरेको विज्ञापन ‘छोटो समयमा रोजगारी’ । महोदय, तीन बर्षको पढाई पाँच /छ वर्ष लगाएर छोटो समयमा रोजगारी भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन?
नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ प्राविधिक शिक्षा अनलाईन मार्फत पढाइन्छ। प्राविधिक शिक्षा अनलाईन मार्फत पढाउनुस भनेर सूचना जारी गर्दा अप्ठ्यारो लागेन? अनलाईनमा पढेर के भोलि हामी सब-इन्जिनियर, नर्स, कृषि प्राविधिक, एचए जस्ता आदिले भोली आफ्नो कर्यक्षेत्रमा गएर Chemistry को balance गर्ने ? reaction गराउने ? के कार्य क्षेत्रमा गएर physics को numerical गराउने? के कार्य क्षेत्रमा गएर maths को derivative र antiderivative गराउने? के गर्ने महोदय? संसद हलमा २७५ जना बसेर अर्थहिन सल्लाह गर्दा कोरोना नलाग्ने अनि हामी ४८ जना एउटा चौरमा बसेर प्रयोगात्मक कार्य गर्दा चाहि कोरोना लाग्ने?
के अब प्राविधिक शिक्षामा घोक्ने र किताबको पढेर परीक्षा दिने प्रविधि हटाउन नमिल्ने हो? सीटीइभीटीको पैसा कमाउने सोच त होइन? परीक्षा नलिँदा सबै विद्यार्थी असफल र विद्यार्थीको जीवन समाप्त हुन्छ त? अब कुरा गरौं रिजल्टको परीक्षा दिएको एक वर्षसम्म पनि रिजल्ट आउदैन। के विद्यार्थी तपाईंहरुले राखेको दास हो? जे गरे नि मिल्छ? कसैको भविष्यको र सपनाको हत्या गर्न पाइन्छ? तपाईंले रकम समयमा लिन सक्ने अनि हामीलाई समयमा रिजल्ट दिन नसक्ने ?
समय अवधिभित्र पढाई सकियोस अनि समयमा रिजल्ट निकालियोस।
Previous Previous post: नेवार समुदायमा सिथि नखः पर्व मनाइँदै
Next Next post: सिन्धुपाल्चोक बाढी अपडेट : मृतकमध्ये ६ जनाको पहिचान
फोक्सोमा बोसो कसरी जम्छ? के के छन् समाधान?
महिनावारी गडबडी देखि दात दुखाइ सम्मको औषधी जाइफल
कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ सय नाघ्यो